မလေးရှားနိုင်ငံမှ နေရပ်ပြန်လာမည့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများ အတွက် နေရာထိုင်ခင်း ဆောင်ရွက်ပေ? - Yangon Media Group
မလေးရှားနိုင်ငံမှ နေရပ်ပြန်လာမည့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများ အတွက် နေရာထိုင်ခင်း ဆောင်ရွက်ပေ?
ဟားခါး၊ သြဂုတ် ၂၄
၂ဝ၁၉ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်မှစတင်၍ ဒုက္ခသည်သက်သေခံ ကတ်ပြားများထုတ်ပေးတော့မည်မဟုတ် ဟု ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင် ရာမဟာမင်းကြီးရုံး၏ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်ကြောင့်မလေးရှား နိုင်ငံမှချင်းပြည်နယ်သို့ ပြန်လာမည့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများကို ဟားခါးမြိုိ့၌ မြို့ပြစီမံကိန်းနေရာ များဖော်ဆောင်၍ နေရာထိုင်ခင်းများ စီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန် ရှိသူတစ်ဦးက သြဂုတ်၂၂ရက်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ နေရာထိုင် ခင်းစီစဉ်တဲ့နေရာမှာ တချို့ကိုယ့် မိဘအိမ်ပြန်ကြတာမျိုးလည်း ရှိ သလိုကိုယ့်မွေးရပ်မြေနေရာတွေကိုပြန်ကြတာလည်းရှိနေမယ်။ သူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်လိုအပ်တာအားလုံး အကူအညီပေးသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြစီမံကိန်းဖော် ထုတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်း နေရာချထားပေးနိုင်အောင်စီစဉ်နေတာလည်းရှိပါတယ်”ဟုချင်း ပြည်နယ်စည်ပင်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက် မှုဝန်ကြီးဦးစိုးထက်ကပြောသည်။
၂ဝ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှ အစပြု၍ ဒုက္ခသည်သက်သေခံ ကတ်ပြားများထုတ်ပေးတော့မည် မဟုတ်ဟု မလေးရှားနိုင်ငံအခြေ စိုက် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး၏ သြ ဂုတ် ၁၃ ရက် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ ချင်းပြည်နယ်သို့ ပြန် လာကြမည့်ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင် ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ် အစိုးရအောက်ရှိ ဌာနအဖွဲ့ အသီး သီးမှဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
”ပြန်လာတဲ့သူတွေနေထိုင်လို့ရမယ့်မြို့ပြစီမံကိန်းဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ မြေစာရင်းကို တောင်သူလယ်သမား၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေသမားတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ပုံစံကျမြို့ကွက်ဖော်ထုတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ထုတ်မယ့် ဧရိ ယာက ဧက ၅ဝဝ ပါ”ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ချင်းတိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည် ၃ဝဝဝဝ ကျော်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ၁ဝဝဝဝ ကျော်ရှိသည့် အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှ ချင်းတိုင်းရင်းသားခေါင်း ဆောင်များမှ နေရပ်ပြန်လာမည့် ချင်းတိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်များအား လက်ခံနေရာချထားပေးရေး ကိစ္စများကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
အိုလံပီယာကို့စ်နှင့် ပွဲစဉ်တွင် ဘန်လေ ပရိသတ် ဓားထိုးခံရ
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ကျင်းပသော ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာလူငယ်ဂေါက်သီးရိုက်အဖွဲ့ ပထမဆု?